Kungani i-lymph node endlebeni yande?
I-lymph node ngemuva kwendlebe isayizi encane. Ngokwesilinganiso, ububanzi bayo abudluli amamitha ayi-8. Ukwanda kwama-lymph nodes kubonisa ukuthi kukhona okungavamile emzimbeni. Ezimweni ezinjalo, udinga ukubona udokotela futhi uhlole ngokugcwele.
Ama-lymph nodes ngemuva kwezindlebe nemisebenzi yabo
Akuyona imfihlo ukuthi uhlelo lwe-lymphatic lubhekene nemisebenzi yokuzivikela yomzimba. I-lymph ijikeleza emzimbeni womuntu ngokusho kwesimiso esikhethekile semithwalo yegazi. Emikhumbi ye-lymphatic, isuswa ama-toxins nama-microorganisms we-pathogenic. Ngakho yiziphi imisebenzi ze-nodes ne-lymphatic system ngokujwayelekile?
I-lymph ibandakanyeka ekuguleni umzimba, isibonelo, idlulisela amafutha namaprotheni.
Ezingxenyeni ze-lymph ze-lymph azikhipha ubuthi, izidumbu zangaphandle nokudla okucutshungulwayo, okungasadingeki umzimba.
Kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi uhlelo lwe-lymphatic luveza amangqamuzana athile - ama-lymphocytes, aphethwe ukubhujiswa kwamagciwane futhi avikele umzimba ekutheleleni.
Yingakho noma kunjalo kungenakwenzeka ukunganaki ukwanda kwama-parotid nodes - lokhu kuyisibonakaliso esibalulekile esibonisa lesi sifo.
I-lymph node ekhulisiwe ngemuva kwezindlebe: izimbangela
Ezimweni eziningi, lokhu kwanda kungenxa yokugula. Ukuba khona kwesifo sofuba kuboniswa ukuvuvukala kwazo zonke izilonda ezinkulu ezinkulu , kanti lapho zendawo, kuphela lezo eziseduze kakhulu phakathi komsebenzi obalulekile osebenzayo wezinambuzane ezincane ze-pathogenic zanda. Iziphi izifo ezingase zihlotshaniswe nesifo esinjalo?
I-lymph node endlebeni ingakhuphuka ngenxa ye-caries.
Esimweni esifanayo kubangelwa ukutheleleka kwebhaktheriya. Ngokuvamile, ukuvuvukala kwe-node kungumphumela wesifo somlomo noma i-otitis. Izifo ezinjalo, njengokubusa, zihambisana nobunzima nomkhuhlane.
Ukutheleleka nge-virus kuhambisana nezimpawu ezifanayo. Ngaphezu kwalokho, izilonda ezandisiwe endlebeni kanye nokuvuvukala kwezakhiwo ezifanayo ku-nape zingabonisa i-rubella. Isizathu singase sibe yi-virus ye-herpes, kanye ne-mononucleosis.
Izimpawu ezifanayo ziyisici sokutheleleka kwefungal, ikakhulukazi uma lesi sifo sibhekene nokushaywa, ukushisa nokushaya isikhumba.
Kuphela ezimweni ezingavamile, i-lymphadenopathy iyimpawu yomdlavuza.
Kunoma yikuphi, ngezinkinga ezinjalo kungcono ukubonana nodokotela ngokushesha.
I-lymph node eyandisiwe endlebeni: ukwelashwa
Ukuze uqale ukwelapha, kufanele uqale uthole isizathu sezo zonke izimpawu ezikhona. Kulula ukukwenza lokhu ngokwakho, ngakho-ke udinga ukuxhumana nochwepheshe ngokushesha. Ukuze wenze ukuxilongwa kokugcina, udokotela uthumela isiguli ukuhlolwa kwegazi, kanye nezinombolo zezifundo ezengeziwe. Akudingekile kuphela ukuqinisekisa ukuthi kukhona ukutheleleka, kodwa futhi ukucacisa uhlobo lwe-pathogen.
Ukwelashwa ngokuqondile kuxhomeke kuhlobo lwesifo esithathelwanayo. Isibonelo, ukutheleleka kwebhaktheriya kusebenzisa ama-antibiotics, kuyilapho izidakamizwa ze-antiviral kanye ne-immunomodulating zisetshenziselwa ukulwa namagciwane.
Kungani umsila wezinyane? Yini okufanele uyenze ezimweni ezinjalo?
Izimbangela, izimpawu, ukuvimbela kanye nokuphathwa kwe-xanthelasm yamajwabu amehlo
Kungani ukupenda izinzipho Feng Shui?
Incwadi yesithenjwa somngenisi. Amakolishi aseSaratov
Ukudla okunomsoco: ukubuyekezwa. Uhlelo lokudla. ibhulakufesi Proper, ukudla kwasemini kanye dinner
Ukwelashwa nokuvikelwa bee Podmore: Ungadliwa and Ububanzi
Ukudla Iyingozi avuse umkhuhlane
U-Xenia Sokolova - umhlaba ngokusebenzisa amehlo oshayayo
Imbewu "cottager Ural": ukubuyekezwa, izinhlobonhlobo kanye nzalo
"Ifilosofi Kristu" Erasmus Basic Imibono